XOG:Siciid Denni & Saaxiibadiisa siyaasada oo kulan deg deg ah ka yeeshay cida noqonaysa Afhayeenka Baarlamaanka Puntland
November 10, 2019 NEWS 0
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu ogaaday in uu dhacay kulan saacado dheer qaatay oo si gaar ah ay u yeesheen Madaxweynaha Puntland Siciid Denni iyo saaxiibadiisa siyaasadeed, kaas oo ay kaga wada hadleen sidii loo dooran lahaa gudoomiye Baarlamaan oo taageersan gollaha xukuumadda.
Kulankaas ayaa qaatay waqti dheeraad ah waxayna dhinacyadu kaga wada hadleen sida ay suuragal u tahay sidii looga fogaan lahaa in ay saameyn ku yeeshaan doorashada hoggaanka Baarlamaanka cid aan taabacsaneyn Xukuumadda.
Madaxweynaha Puntland iyo saaxiibadiisa xagga siyaasada ayaa miiska wada xaajoodyada soo dhigay labo musharax oo la xaqiijiyey in ay yihiin kuwa u tartamaya qabashada xilkan iyo musharax kale oo isna saameyn badan yeelan doona, haddii uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa.
Warar ay heshay PuntlandTimes ayaa sheegaya in Madaxtooyada Puntland ay doonayso in uu noqdo Afhayeenka Baarlamaanka afarta sanno ee nagu soo aadan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo horey uga soo shaqeeyey Madaxtooyada, kana mid ah xubno dhaliilo badan loo jeediyo oo ku jira gollaha, qeybna ka qaatay sidii xilka looga qaadi lahaa gudoomiyaha diiday natiijadii Baarlamaanka.
Madaxtooyada ka sokow damaceeda qaar kamid ah saaxiibada Siciid Denni ayaa u arka in uu Abwaan yahay nin aan ka gadmi karin dadka iyo Baarlamaanka gudihiisa oo ay tahay mid halis badan keenidiisa, gaar ahaana ay sii kordhinayso sumcad-xumida kasoo gaartay faragalintii Baarlamaanka ee Madaxtooyada.
Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in miiska wada xaajoodyada ay dhinacyadu keeneen Cali Dhahar oo isna katirsan xildhibaanada Baarlamaanka waa qunyar socod laakiin muddo dheer khibrad u leh howlaha Baarlamaanka, wuxuuna 8 sanno oo hore soo ahaa Xoghayaha joogtada ah ee golaha inkastoo Baarlamaanka ayuu soo galay bilowgii sannadkan markiisii koowaad.
Mr. Dhahar caqabado waa weyn ayaa hortaagan dad badan ayaana ku dhaliilaya in uusan lahayn saamayn weyn oo ku wajahan arrimaha gobalka Sanaag, taas oo ay doonayso xukuumadda Puntland cid ka xigsata soona jiidata bulshadaas oo hada u arka xukuumadda mid aan iyaga waxba muhiimad ah u haynin.
Siciid Denni ayaa kalsooni weyn ku qaba Cali Dhahar sida ay ogaatay PuntlandTimes, waxaana xoguhu sheegayaan in uu dhex maray kulan gaar ah.
Warar madax banaan oo aan helnay ayaa sheegaysa in aysan wali jirin go’aan rasmi ah oo ay qaateen Madaxweynaha Puntland iyo saaxiibadiisa siyaasadeed oo iskugu jira ganacsato, siyaasiin iyo wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa, waxaana adag in ay hore iskugu raacaan arintani balse kulan dambe ayey yeelan doonaan ka hor maalinta Khamiista oo ay doorashadu dhici doonto.
Warbixin gaar ah ayaan kaga hadli doona sadexdan musharax waxa laga yaqaano, saameyntooda ku wajahan gobalka Sanaag oo ay kasoo jeedaan & Damacyada jira.
Madaxweynaha Puntland oo booqday xarumo dowladeed oo Jabuuti ku yaala
DAAWO VIDEO:Sir Wixii Yaabka Laha Farmaajo Hargeysa Tago,Aqbalada Bixi Iyo isbadalka Kale.
Shir looga Arrinsanayey Hawl-gabka iyo Liltirka shaqaalaha Puntland oo Nairobi lagu qabtay
Puntland oo shaqadii ka joojisay shirkaddo badan & Wasiir sheegay inay….
DAAWO:RW Kheyre oo kormeeray xarun cusub
DAAWO:RW Khayre oo kulan la qaatay taliyaasha ciidamad dalka
WAR DEG DEG AH: Wasiiro kasocda Itoobiya oo hadda ka gaaray Hargeysa & Nuxurka Dhambaalka ay kasidaan RW Itoobiya.
XOG CUSUB: Somaliland oo 40 maalmood gudahood ku gaari doonta Xaduudaha ay sheegato ee ay isku hayaan Puntland.
DAAWO:C/raxmaan Cirro oo magacaabay masuuliyiin cusub
FALAQEYN:Damaca Ethiopia & Diidmada Biixi maxaa ka dhalan kara?
Wasiirka Gaashaandhiga Yemen oo qarax ka bad baaday
Askari Kenyan ah oo nus Dollar baad ah ku dilay darawal